बर्तमान नेपाली क्रिकेटमा समस्या र निकास | Cricket Himalaya |
बर्तमान नेपाली क्रिकेटमा समस्या र निकास
By Bhanu Sigdel Last updated Jun 20, 2018 1,473 0
– बिनोदबिकास सिम्खडा, कृकेट हिमालय
अपेक्षित रुपमा बढ्न नसक्नुको कारण : राज्यको सबै सयन्त्र धरासायी छ देशमा – त्यस्तो अवस्थामा क्रीकेट मात्र फस्टाउने सपना पाल्नु गाह्रो छ ! बि स २००७ साल देखि स्थाइ सरकार नभएको देश जसरी पशुपतिनाथकै भरमा चल्दै आयको छ, नेपालि क्रीकेट पनि त्यसरी नै चल्यो – मह काड्ने ले हात मात्र चाटेनन घार नै फोडे।
सस्पेन्सन पछिको नेपाली कृकेट : सस्पेन्सन पछि दुई तरिकले नेपाली क्रीकेट चलेको छ । ICC ले प्रत्यक्ष रुपमा चलाएको भनिएको नेपाली क्रीकेट, पर्दा पछाडी बाट नेपालकै ४/५ जनाले चलाइएको छ। यी आफुलाइ क्रीकेटको सर्बेसर्बा ठान्ने हरु, राज्नैतिक नियुक्ति भन्दा खराब रुपमा देखा परेका छन – यिनको चङुल बाट क्रीकेट बचाउन गाह्रो देखिब्छ !!
अपेक्षा को बाट : पुराना र अनुभवी कृकेट प्रसासकहरु जस्तै बिनय कु शाह लगायतकाले केही गर्दैनन ! नयाले गर्छु भनेर भाग ओगटेका छन तर गर्दैनन ! सिप्यान नामको सर्प नेपाली क्रीकेटको भविष्यमा कालो नाग भएर निस्किने छ – यसलाइ मौलाउन दिन हुदैन – यो नया शक्ति को रुपमा आएको छ – यो नि आफ्नो भुँडी भर्ने निकाय हो ! व्यब्सायिक क्रीकेटको नाममा फ्यान र स्पोन्सर भजाएर पैसा कमाउने टोलि पनि देखापरेको छ – यि सबलाइ चल्न दिनु पर्छ तर चलखेल गर्न दिनु हुन्न !
निकास के हुन सक्छ : निकास दिन अहिले नेपाली क्रीकेट यसरि विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुमा बाढिएको छ कि यो हुन मुस्किल छ ! साचै भन्ने हो भने नेपाली क्रीकेटको निकास दिलाउन सक्ने पारस खडका मात्र हुन किनकी अहिले ICC ले पारसको मात्र सुन्छ । यो कुरा धेरैले नपत्याउन सक्छन तर यो नै सत्य हो। पारस पछि यो गर्न सक्ने अर्का ब्यक्ती बिनोद दास हुन तर आन्तरिक रुपमा उनको प्रभुत्व पारसको जति छैन । नेपाली क्रीकेट पुर्ण रुपमा पारस र बिनोद लाई बुझाउदा के हुन्छ भनेर सोच्नु पर्छ । अहिलेको लागि निकास यहि हो तर कालान्तरमा यो झनै ठूलो समस्याको रुपमा देखा पर्न सक्छ तर भविस्य कसले देखेको छ र।
ICC Cricket World Cup Qualifier 2018 schedule announced
बैतडीमा मेयरकप क्रिकेट सुरु, उद्घाटन खेलमा नागार्जुन विजयी